सृजना विकास केन्द्र नवनिर्वाचित समितिको पदस्थापन – Arthik Awaj
सृजना विकास केन्द्र नवनिर्वाचित समितिको पदस्थापन
By आर्थिक आवाज २०७५ मंसिर २४ गते सोमबार १३:०७ मा प्रकाशित
पोखरा, २३ मंसिर । सृजना विकास केन्द्र पोखराको नवनिर्वाचित समितिको पदस्थापन सम्पन्न भएको छ । सोमबार एक कार्यक्रमका बीच समितिको पदस्थापन गरिएको हो । पदस्थापन कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेशका सांसद विन्दुकुमार थापाले सिर्जना विकास केन्द्रले सामाजिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको बताए । पोखरा वडा नं. ८ का वडा अध्यक्ष तथा संस्थाका पूर्व अध्यक्ष रुद्रनाथ बरालले सिर्जना विकास केन्द्रको गरिमा बचाउने गरी काम गर्न नवनिर्वाचित समितिलाई आग्रह गरे ।
शनिबार सम्पन्न अधिवेशनबाट केन्द्रको अध्यक्षमा मीनप्रसाद भट्टराई निर्वाचित भएका हुन् । प्रथम उपाध्यक्षमा ईन्द्रप्रसाद पौडेल, द्वितीय उपाध्यक्षमा पार्वती उपाध्यय बराल, महासचिव राधिका रेग्मी, सचिवमा चन्द्र गिरी र कोषाध्यक्षमा कमलादेवी गिरी सर्वसम्मत निर्वाचित भएका थिए । सदस्यमा तुलसीप्रसाद बराल र पवित्रा पौडेल के.सी. चयन भएको निर्वाचन संयोजक राजकुमार गिरीले जानकारी दिए । २ जना सदस्य पछि मनोनित गर्ने बताइएको छ ।
निर्वाचन समितिको संयोजकमा पूर्व अध्यक्ष तथा सल्लाहकार राजकुमार गिरी र सदस्यमा पूर्व अध्यक्ष तथा सल्लाहकार तारा गिरी, कानुनी सल्लाहकारमा एकनारायण अर्याल थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै नवनिर्वाचित अध्यक्ष भट्टराईले सृजना विकास केन्द्रको हकहितका लागि सक्रिय भएर लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । निबर्तमान अध्यक्ष अर्जुन श्रेष्ठले समितिको साथमा रहेर काम गर्ने बताए । पूर्व अध्यक्ष तथा सल्लाहकार तारा गिरी, निर्र्वाचन कमिटिका संयोजक राजकुमार गिरी लगायतले उक्त अवसरमा बोलेका थिए ।